मधेशमा अजीवको हिन्दु संस्कार : पतिको कुटाइबाट मृत्यु भएकी सुनितादेवीलाई तिनै पतिको नामको सिन्दुर लागाइदिएर शब जलाइयो !
काठमाडाैं, १८ चैत्र । मधेसको हिन्दु संस्कार सार्है अजीवको छ । उक्त संस्कारअनुसार विवाहित महिलाको मृत्युपछि सिन्दुर–पोते सजाएर दाहसंस्कार गरिन्छ । पति जिउँदै हुँदा मृत्यु हुने महिललाई ‘भाग्यमानी’ ठानिन्छ । र, उनलाई पतिका नामको श्रृंगार लगाइदिन्छ ।
पाटीको कुटाइबाट मृत्युबरण गरेकी पर्साकी सुनितादेवी यादवको अन्तिम संस्कारमा पनि आइतबार समाजले त्यसै गर्यो । चिकित्सक पति सचितानन्दको यातनाबाट ज्यान गुमाएकी उनले मृत्युपछि पनि तिनै हिंस्रक पतिको नामको सिन्दुर लगाउन बाध्य भइन् । अन्तिम संस्कारअघि मृत शरीरमा श्रीमान्को नामको सिन्दुर, पोते, रातो साडी र चुनरी आदी लगाइयो ।
अगुवा महिलाले यसलाई ‘अन्यायपूर्ण’ भनेका छन् । जुन श्रीमान्ले यातना दिएर हत्या गरे, तिनकै नामका सिन्दुर पोते लगाएर अन्तिम बिदाइ दिँदा महिलामाथिको हिंसालाई अझ बढावा पुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जालममा व्यापक आपत्ति जनाइएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
ठगीको आरोपमा कलाकार तथा निर्मात्री प्रज्ञा जोशी इटहरीबाट पक्राउ !
जजलाई जुरुक्क उचाल्दै आयुषले फेरि पाए १०० प्रतिशत अंक ! (भिडियोसहित)